Faa'iidooyinka socodka: xakamee miisaankaaga adigoo socda | Ragga Stylish
Waxyaabaha sida fudud u socodka ah ayaa yeelan kara faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan. Waxaa jira dad badan oo ku jira hannaan luminta dufanka oo dhayalsaday ficilka socodka. Marka aan ka hadlayno socodka waxaan ka hadlaynaa xitaa socodka xawaare caadi ah. Waxay leedahay faa iidooyin caafimaad oo ka badan intaad qiyaasi karto. Sidaa darteed, waxaan qormadan u hibeyn doonnaa si aan u xusno faa'iidooyinka kala duwan ee aad ka hesho socodka.
Hadaad rabto inaad ogaato faa'iidooyinka socodka, sii wad aqrinta qoraalkan.
1 Socodka luminta dufanka
2 Faa'iidooyinka socodka
2.1 Waxay yareysaa halista inaad noqoto qof dhiig kar
2.2 Waxay soo saartaa saameyn wanaagsan oo ku saabsan kolestaroolka
2.3 Waxay ka caawisaa ka hortagga bilawga cudurka macaanka
2.4 Waxay hagaajisaa nolosha galmada
2.5 Kordhi heerarka fiitamiin D-ga
2.6 Ka caawi inaad lumiso miisaanka
2.7 Iska ilaali cayilka iyo keydinta cellulite
2.8 Waxay gacan ka geysaneysaa qaadashada daawooyin yar
2.9 Waxay hagaajisaa wareegga
2.10 Tones lugaha, glutes iyo abs
2.11 Socodku wuxuu u fiican yahay caafimaadka lafaha
2.12 La dagaallama kansarka naasaha
2.13 Waxay yareysaa halista ah inuu ku dhaco kansarka mindhicirka weyn
2.14 Waxay xoojisaa qalbiga
Socodka luminta dufanka
Markaan wajahno marxaladda luminta dufanka, waa inaan mudnaanta siinnaa abuurista tamar yari maalinteena maanta. Wadarta kalooriyada aan ku cunno cuntada waa inay ka yaraato tamarta aan ku bixino howlaheenna jireed iyo dheef-shiid kiimikaadka asalka ah. Tan awgeed, waxaa jira qalab sida cunto kaloori oo hooseeya iyo jimicsi jireed oo la xiriira. Markaan ka hadlayno jimicsiga jirka uma jeedno jimicsi leh culeysyo iyo jimicsi wadnaha ah. Si kastaba ha noqotee, socodka kuma dhacayo labadaas qaybood midkood.
Markaan tixraacno erey loo yaqaan NEAT, waxaan ula jeednaa dhaqdhaqaaqa jirka ee aan la xiriirin jimicsiga. Taasi waa, nolol maalmeedkeena, waxaan u lugeynaa dukaan si aan wax u soo iibsanno, jaranjarooyin ayaan fuulnaa, eeyga ayaan ku soconnaa, iwm. Hawlahani waxay sidoo kale gacan ka geystaan ​​gubista dufanka maadaama ay soo saaraan kharashka kalooriga waqti ka dib. Haddii aan maaraynno kordhinta NEAT-kan, waxaan ku abuuri karnaa kharash badan oo tamar ah hawl-maalmeedkeenna caadiga ah iyada oo aan loo baahnayn waxqabad jimicsi sida jimicsi wadnaha ah (orod, orod, orod, baaskiil, iwm.)
Kaliya maahan inaan ku kordhino kharashka tamarta socodka, laakiin sidoo kale waxaan ka faa'iideysanaa faa'iidooyin badan.
Waxaan mid mid u falanqeyneynaa faa'iidooyinka ay socodku na siinayaan.
Waxay yareysaa halista inaad noqoto qof dhiig kar
Waxaa jira dad la ildaran cadaadiska dhiigga oo ka sarreeya heerarka caadiga ah, haddii aan si joogto ah u soconno, waxay naga caawin kartaa yareynta qiimayaashan dhiig karka.
Waxay soo saartaa saameyn wanaagsan oo ku saabsan kolestaroolka
Haddii aan u socono si joogto ah maalinba maalinta ka dambeysa way na caawin doontaa sidoo kale hoos u dhig heerka LDL kolestaroolka (sidoo kale loo yaqaan kolestaroolka xun) iyadoo kaa caawinaysa inaad sidoo kale yareyso culeyska jirkaaga iyo culeyska fekerka.
Waxay ka caawisaa ka hortagga bilawga cudurka macaanka
Dadkaas cuna caddad badan oo sonkor ah maalin kasta oo aan sameyn wax dhaqdhaqaaq jireed ah waxay u badan tahay inay ku dhacaan cudurka macaanka. Sidaa darteed, socodka caadiga ah ee jirkaagu ugu shaqeyn karo walxaha kiimikada ee jirkaaga si dhakhso leh sidaas darteed waxaad u muuqan kartaa inaad ka mid tahay cudurkan.
Waxay hagaajisaa nolosha galmada
In kasta oo ay u muuqato inuusan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya, galmada iyo jimicsiga ayaa isla socda. Waxaa jira daraasado dhowr ah oo haweenka u dhexeeya 45 iyo 55 sano jir samee jimicsiyo dheeri ah, oo ay ku jiraan socod maalmeedka, waxay soo sheegeen inay leeyihiin rabitaan galmo iyo qanacsanaan badan.
Kordhi heerarka fiitamiin D-ga
Sidaan ognahay, fitamiin D-ga waxaa lagu dari karaa qoraxda. Haddii aan socod lug ku aadno maalintii waxaan ka faa'iideysan karnaa soo-gaadhista qorraxda. Waxaan xasuusnaano in fitamiin D-ga uu door muhiim ah ka ciyaaro dhinacyo badan oo caafimaadka lafaha ah iyo habka difaaca jirka. Yaanan ilaawin inay lagama maarmaan tahay inaad iska ilaaliso falaadhaha cadceedda si aanu maqaarku u dhaawacmin. Si kastaba ha noqotee, soo-gaadhista muddada-gaaban ee maalinlaha ah ayaa badanaa ku filan inay soo saarto fiitamiin D-ga jirkeennu u baahan yahay.
Waxaan sidoo kale ka soo qaadannaa fitamiin D-ga cuntada.
Ka caawi inaad lumiso miisaanka
Haddii aan soconno xitaa 40-45 daqiiqo hal mar Waxaan bilaabi karnaa inaan gubno dufanka 20-25 daqiiqo ka dib socodka. Ku socoshada xawaare dhexdhexaad ah kaliya nama caawineyso inaan gubno dufanka ku keydsan laakiin sidoo kale waxay naga caawineysaa inaan dhisno murqo u adeega si loo kordhiyo dheef-shiid kiimikaadkeena.
Kordhinta dheef-shiid kiimikaadka asalka ah ayaa faa'iido u leh abuurista kharash badan oo tamar ah xaqiiqda fudud ee noolaanshaha. Haddii aan leenahay qarash badan xagga tamarta nasashada, uma baahnid in aan abuurno hoos u dhac noocan oo kale ah oo ku saabsan kalooriyada cuntadeena.
Iska ilaali cayilka iyo keydinta cellulite
Kuwani waa qaar ka mid ah dhibaatooyinka inta badan weerara bulshada maanta. Waxaan ku nool nahay faafida buurnida guud ee adduunka oo dumarka badankood da 'gaar ah kadib markay leeyihiin da' cellulite dhigaal ah oo laxiriira isku uruurinta dareereyaasha iyo dufanka. Haddii aan si adag oo gaaban u soconno dhowr jeer maalintii waxaan lahaan karnaa saameyn la mid ah kal-fadhiga iska caabbinta aerobikada. Intaa waxaa dheer, waxay ka caawisaa ilaalinta miisaanka jirka iyo dheelitirka dheef-shiid kiimikaadka.
Waxay gacan ka geysaneysaa qaadashada daawooyin yar
Kaliya socodka saacad badhkeed maalintii, waxaa jira dad badan oo la ildaran niyad jab oo ku guulaystay inay hagaajiyaan niyadooda. Intaad socoto waad awoodaa yaree fikradaha xunxun, dib uhadal fikradahaaga, abaabulo maalinba maalinta kadambaysa, yaree xanaaqa iyo xiisada iyo, sidaa darteed, daal maskaxeed. Waxaa jira daraasado muujiyey in layligani doorbidayo natiijooyinka dawooyinka lidka diiqada.
Waxay hagaajisaa wareegga
Faa'iidooyinka socodka waxaan ka heleynaa hagaajinta wareegga xagjirkeenna, gaar ahaan kuwa hoose. Tani waa sida aan uga hortageyno muuqaalka xididdada xididdada dhiigga oo aan ku ilaalino dhammaan xubnaha jirkeenna xaalad hagaagsan innagoo haysanno socod dhiig oo wanaagsan.
Tones lugaha, glutes iyo abs
Socodku wuxuu gacan ka geysan karaa qaabeynta lugaha iyadoo si wanaagsan loo qeexayo weylaha, muruqyada, afarleyda, iyo kor u qaadista cirridka. Haddii aan sidoo kale fiiro gaar ah u leenahay booska inta aan socodka sameyneyno, sidoo kale waxaan ku dhawaaqi karnaa maqaarka.
Socodku wuxuu u fiican yahay caafimaadka lafaha
Haddii aan maalin walba soconno waxaan kicineynaa oo xoojinaynaa lafahayaga, sidaa darteed waxaan kordhin doonnaa cufnaanta lafaha.
La dagaallama kansarka naasaha
Daraasadaha ayaa muujinaya in socodka joogtada ah ee dumarka laga helay kansarka naasaha waxay u dhowdahay inay badbaadaan 45% marka loo eego kuwa aan firfircooneyn.
Waxay yareysaa halista ah inuu ku dhaco kansarka mindhicirka weyn
Tan waa la cadeeyay tan iyo socodku wuxuu caawiyaa xawaareynta dheefshiidka. Tani ama waxay ka hortageysaa cuntada inay urursato oo aan sidoo kale dheefshiid lahayn iyo in saxaradu aysan soo saarin caabuq.
Waxay xoojisaa qalbiga
Markaan dhiig badan ku shubno waan awoodnaa yareeyo cudurka wadnaha iyo istaroogga ilaa 27%.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkani ay kaa caawiyeen inaad si fiican u fahamto faa'iidooyinka socodka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Faa'iidooyinka socodka
Sida loo dhimo miisaanka